Muuqaalka dhalashada duufaanta dabka | Saadaasha Shabakadda
ka dabeylaha duufaanka Waxay u muuqan karaan ifafaalooyin si dabiici ah loo abuuray, laakiin runtu waxay tahay inay yihiin dhacdooyin dabiici ah. Duufaannada hawada waa kuwo cajiib ah, laakiin duufaannada dabka ... waa wax aan caadi ahayn.
Ma jeclaan lahayd inaad aragto dhalashada duufaan dab ah?
Duufaannada dabku waxay ku samaysmaan xaalado gaar ah, guud ahaan kuwa laga helo dabka ka kaca dabka. Dabka ayaa wareegaya isla waqtiga uu kacayo, sameysana hawo hawo ah. Badiyaa waxay u dhexeeyaan 10 ilaa 50 mitir, iyo balac yar. Dabaysha dabayshu waa xoog badan tahay, in ka badan 160km / saacaddii, sidaa darteed aad bay khatar u yihiin, maaddaama ay sidoo kale burburin karaan geedo ka sarreeya 10 mitir.
Taariikhda dhow dhow waxaa jirey dhowr duufaanno dab ah oo sababay kumanaan qof. Tusaale ahaan, Bombardment of Dresden (intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka) wuxuu sameeyay mid baabi'iyay kalabar magaalada, marka lagu daro dilka qiyaastii 40 kun oo qof. Duufaanta dabku waa, sidaan aragno, ifafaale in waxay noqon kartaa mid wax dumisa. Haddii mid ka mid ah aad la kulanto, waxa ugu fiican ee aad sameyn karto waa inaad dhammaato oo aad wacdo waaxda dabka.
Si kastaba ha noqotee, markaad rabto inaad waxbarto majirto wax kafiican inaad kadhigto mid duurka kujira oo aad duubto waxa kudhaca gaabis, sida Slow Mo Guys sameeyay. Waxay ku sameeyeen iyaga oo dib ugu soo nooleeyay geeddi-socodka qaab masiixi ah, dahaarka ku dhajinaya baaldi dareere ololi kara. Natiijooyinkuna waxay ahaayeen kuwa layaableh.
Si tartiib tartiib ah, ayaa loo sameeyay wareegga wareega, kaas oo sii hurinaya ololka iyo ... arrin waqti aad u gaaban ah, a safka dabka. Xiiso leh, miyaadan u malayn?
Dabcan, haddii aad ku dhiirrato inaad isku daydo, ku samee meel aad ka maamuli karto, iyo marwalbana iska ilaaliya qabyooyinka adag si looga fogaado xanaaq.
Maxaad u maleysay fiidiyowga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » VIDEO: Dhalashada duufaan dab ah
Khudaarta ku bixi ... qabowga Alaska?